Spider-Man မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
LEGO Christmas 2021 catalog သည်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အသစ်အသစ်များကိုပြသည်
22 / 09 / 2021 22 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 154 Views စာ0မှတ်ချက် 42131 CAT D11T ဘူဒိုဇာ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, 76240 Batmobile Tumbler, Batman, City, Creator Expert, Ideas, Lego, Lego Batman, Lego CIty, Lego City စတန့်, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Lego Technic, Marvel, Spider-Man, Star Wars, နည်းပညာ, The Dark Knight ဟာ, အဆိုပါ LEGO Group
ပထမဆုံး LEGO ခရစ်စမတ် ၂၀၂၁ ကတ်တလောက်ကိုယခုနောက်ပိုင်းတွင်အသစ်ထွက်ရှိမည့်အစုံအသစ်များကိုပြသသည်
LEGO နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ Spider-Man 2022 စုံ
20 / 09 / 2021 20 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 59 Views စာ0မှတ်ချက် Doc Ock ပါ, ဆရာဝန် Octopus, အစိမ်းရောင် Goblin, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Lego Spider-Man, Marvel, ကြံ့, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, Spider-Man, ပင့်ကူလူသား, Spidey နှင့်သူ၏ Amazing Friends
LEGO ဆိုတဲ့ကောလဟာလသုံးခု Spider-Man ၂၀၂၂ ခုနှစ်အစုံများသည်စျေးနှုန်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအပါအ ၀ င်၎င်းတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ဖွယ်ရှိသည်
Lego Spider-Man ၂၀၂၂ မှာကောလဟာလတွေအရိပ်အမြွက်ထွက်နေတယ် classic လူကြမ်း
20 / 09 / 2021 20 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 82 Views စာ0မှတ်ချက် 76037 Rhino နှင့် Sandman Super Villain အသင်းစု, 76152 Loki ၏သေစားသေစေသောအမျက်ဒေါသ, Disney အသက်ငယ်သော, Doc Ock ပါ, အစိမ်းရောင် Goblin, Gwen Stacy, Instagram ကို, Lady Octopus ပါ, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလများ, Lego Spider-Man, Marvel, မိုင် Morales, ပတေရုသက Parker, ကြံ့, ကောလာဟလာ, Spider-Man, Spidey နှင့်သူ၏ Amazing Friends, အဆိုပါ Amazing Spider-Man 2, အဆိုပါ LEGO Group
နောက်နှစ် LEGO ၏ပထမဆုံးကောလာဟလ Spider-Man အစုံအွန်လိုင်းမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးငါတို့နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်နိုင်ပုံရတယ်
LEGO အသစ်ရနိုင်မလား Marvel Wolverine minifigure လမ်းမှာရောက်နေပြီလား။
11 / 09 / 2021 11 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 72 Views စာ0မှတ်ချက် 76073 Mighty Micros: Wolverine နှင့် Magneto, 76175 Spider-Man Spider Lair ကိုတိုက်ခိုက်ပါ, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel's Spider-Man 2, MarvelWolverine ရဲ့, Marvel's Spider-Man, မိုင် Morales, ပတေရုသက Parker, PlayStation, Spider-Man, Wolverine
အသစ်တစ်စုံ Marvel PlayStation Showcase တွင်ထုတ်ဖော်ပြသပြီးနောက်ဂိမ်းများသည်ယခုအခါဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်
တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ Marvel'' s ကို Spider-Man ထူးခြားချက် LEGO ရုပ်ရှင်တစ်ကားရှိလား။
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 106 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, Lego မှ marvel, Lego ရုပ်ရှင်, Lego ရုပ်ရှင်, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Marvel, Spider-Man, Star Wars, အဆိုပါ Lego Batman Movie,, universal, Universal Pictures
The LEGO Movie ၏ကာတွန်းပုံစံကို web sling တွင်အသုံးချလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း Spider-Man? ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ကာတွန်းဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်
LEGO လား Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle အရိပ်အမြွက် Spider-Manအိမ်ပြန်လမ်းမရှိဘူးလား။
05 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 135 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, Lego, LEGO Group, Lego မှ marvel, LEGO.com, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group
Lego Marvel 76178 Daily Bugle ကိုအပြည့်တင်ထားသည် Spider-Man ကိုးကားချက်များ၊ သို့သော်သူတို့သည်အနာဂတ်ရုပ်ရှင်ဖြတ်ကျော်မှုများကိုညွှန်ပြနေသလား။ ကြိုက်တဲ့ဟာ
Lego အသစ် Marvel နှင့် Disney VIP ပုံနှိပ်များကိုအွန်လိုင်းတွင်တွေ့သည်
04 / 09 / 2021 04 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 165 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, လှယမင်းနဲ့လူကြမ်းကြီး, Belle, နေ့စဉ်အမှား, စာချုပ်, Disney, Disney မင်းသမီး, Disney မင်းသမီး, အဲလ်ဆာ, ရေခဲသော, ဂျေယောန Jameson, Lego, lego အပေးအယူ, Lego Disney, Lego Disney မင်းသမီး, Lego အေးခဲ, Lego မှ marvel, LEGO ကမ်းလှမ်းမှု, Lego Spider-Man, Marvel, ပေးကမ်း, Rapunzel, Spider-Man, ညိတွယ်, VIP, VIP ဆုများ, VIP ဆုပေးစင်တာ
LEGO VIP ပရင့်ခ်အသစ်များစုဆောင်းခြင်းကို online မှတွေ့ရှိပြီး၎င်းမှလာမည့်အခမဲ့ပစ္စည်းအချို့အားလှောင်ပြောင်သည် LEGO Group
Lego MarvelEternals သည်စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုအတည်ပြုသည်
02 / 09 / 2021 02 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 187 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76176 ဆယ်ကွင်းမှလွတ်မြောက်, 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego မှ marvel, LEGO.com, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော MarvelEternals အစုံများသည်နောက်ဆုံးတွင် LEGO.com တွင်သူတို့၏စျေးနှုန်းများကိုအတည်ပြုပေးပြီး၎င်းတို့ ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်မည့်အချိန်ကိုအတည်ပြုသည်။
Lego 71031 Marvel ယနေ့စုဆောင်းနိုင်သော Minifigures စတူဒီယိုများ
01 / 09 / 2021 28 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 87 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, မိကျောင်း Loki, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Spider-Man, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…?
အဆိုပါ Lego Marvel စုဆောင်းနိုင်သော Minifigures များသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်များပေါ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး WandaVision အတွက်ပထမဆုံး minifigures များနှင့်အခြားအရာများယူဆောင်လာခဲ့သည်။